Fomba 5 handaminana ny fanangonana ny boky | Bezzia
Maria vazquez | 04/05/2021 12:00 | an-trano
Isika izay tia mamaky teny dia manoratra ireo lohateny miandry mba hovakina anaty lisitra iray. Lisitra mitombo amin'ny taha mahavariana izay tsy zakantsika. Tsy mividy ny lohateny rehetra ao anaty lisitra izahay, lavitra azy io, fa manangona ao an-trano ihany a fanangonana boky manan-danja izay mila alaminao amin'ny fomba sasany.
Manaova tranomboky izay ahafahana mametraka azy rehetra dia nofinofisin'ny maro. Ny zava-misy anefa dia manery antsika hizara azy ireo amin'ny efitrano samihafa. Na izany aza mitazona filaminana ao amin'ny angoninay Azo atao izany amin'ny fampiharana ny iray amin'ireo raikipohy dimy hatolotsika anio. Hanomboka ve isika?
Matetika ny boky dia mitana toerana misy ifandraisany ao an-tranontsika, ka izany no antony maha-zava-dehibe ny ankamaroan'ny olona ny fomba fandaminana azy ireo dia mamaly ny fepetra azo ampiharina sy hatsarana. Ny manatevin-daharana azy roa dia sarotra fa tsy azo atao. Na inona na inona fomba fidinao hataonao, ity no toro-hevitra voalohany alainay: mitahiry talantalana ao a toerana tianao kokoa ho an'ireo boky vao tonga, ireo izay mbola tsy novakianao.
1 Amin'ny miralenta
2 Amin'ny filaharan'ny abidia
3 Nataon'ny mpanonta
4 Amin'ny loko
5 Ho an'ny fiaraha-miory
Rehefa lanina isan-karazany ny karazan-tokantrano (sanganasa, tantara foronina, tantaram-piainana, memoara, teatra, tononkalo), ny fandaminana boky arak'ity fepetra ity dia safidy azo ampiharina foana. Raha vantany vao sokajiana amin'ny sokajy izy, ho fanampin'izay, raha malala-tanana ny isan'ny boky, azonao atao ny manangona any aoriana mba handamina azy ireo amin'ny filaharan'ny abidia na fanontana. Fomba roa handaminana azy ireo amin'ny tombony sy fatiantoka mifanentana aminy.
Amin'ny filaharan'ny abidia
Ny fanasokajiana ny tranomboky amin'ny alfabeta dia mbola iray amin'ireo safidy malaza indrindra. Mamaky tantara foronina ve ianao? Raha misy karazana manjaka ao amin'ny fanangonana ny bokinao dia azonao atao ny mandamina izany ao amin'ny fivarotam-boky manisy fiheverana ny voalohan'ny anaran'ny mpanoratra. Azonao atao ny mahita ny bokin'ny mpanoratra tianao indrindra.
Sarotra aminao ve ny mahatadidy lohateny sy mpanoratra ny sanganasa novakianao? Raha toa ahy ianao roa volana aorian'ny famakiana azy ireo dia sarotra aminao ny mitadidy ilay adihevitra, mety tsy izany no fomba tsara indrindra ho anao. Raha ho anao sy ho ahy ny fomba fahitana bebe kokoa dia mety ho azo ampiharina kokoa.
Raha tsy mahatadidy lohateny na mpanoratra ianao fa raha tsy tadidinao ny toetra mampiavaka ny boky toy ny hateviny, ny lokon'ny hazondamosina na ny fonony, ny fomba fandaminana bebe kokoa dia afaka manampy betsaka. Ny fanasokajiana azy ireo amin'ny mpampanonta, ohatra, dia mety hanampy anao hahita boky haingana.
Amin'ny ankamaroan'ny tranga dia mora ny mamantatra hoe iza ny mpampanonta boky ananan'ny boky amin'ny alàlan'ny fijerena ny hazondamosina ihany. Tena mampiavaka azy, ohatra, ny mena amin'ny fanangonana Periférica. Ary koa ny tsipika volomboasary na mena amin'ny hazondamosin'ny tranon'ny mpanonta Acantilado na ny sary famantarana ny fanangonana Anagrama.
Ity fomba ity, ankoatry ny maha-azo ampiharina, dia mamela antsika handamina ny famakiam-boky amin'ny fomba izay hiarahan'ireo boky manana toetra mitovy aminy. Fomba fanao manolotra antsika a fomba fijery milamina sy manintona kokoaamin'ny ankapobeny dia avy amin'ny tranombokintsika.
Fomba iray miaraka amin'ny fanatrehana betsaka amin'izao fotoana izao ao amin'ny Instagram, tambajotra iray izay toa karakarain'ny maso avokoa, ny fandaminana ireo boky miloko. Azo ampiharina? Raha toa ahy ianao dia manana mémoire miovaova, dia mety raha mbola kely ihany ny fanangonana boky.
Tsy azontsika lavina fa ny boky misy hazondamosina mainty sy fotsy no maro an'isa. Marina fa mihabetsaka ny mpitory, ny ankamaroany vaovao sy / na tsy miankina, miloka amin'ny loko fa tsy fahita firy, ohatra, ireo boky misy fotony volomparasy na maitso, mba hanomezana ohatra vitsivitsy. Ka raha ny fahitana ny fivarotam-boky ho tsara tarehy nefa mety tsy mahay mandanjalanja ary tsy hisy zavatra azonao atao amin'izany.
Ho an'ny fiaraha-miory
Tianao ve ilay boky? Azonao omena olona ve izany? Ny fahatsapana fa manana famakiana iray ohatrinona ny tsy maintsy hamerenanao azy io amin'ny tranomboky no mety ho lasa fomba fanasokajiana manan-kery toy ireo teo aloha. Maninona raha mandamina ireo bokinao amin'ny sokajy telo? Ireo izay tianao na ny famakiny dia nanamarika anao tamin'ny lafiny iray. Etsy ankilany, ireo izay nankafizinao fa ny olona sasany fotsiny no anoroanao azy. Ary farany, ireo izay tsy tianao ary mety hivarotra na hanome olona afaka mankafy azy ireo ianao.
Mampiasa fepetra rehetra handaminana ny fanangonana bokinao ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » an-trano » Fomba 5 handaminana ny fanangonana ny bokinao